दुःखी तथ्याङ्क: महिला र बालिका मा भारत सञ्जाल, महिला सञ्जाल, महिला
समानता र विकास»विश्व बैंक भन्ने अनुमान पछिल्लो समयमा दुई शताब्दीपछि, हरेक वर्ष केही बालिका मारिए किनभने आफ्नो लिङ्ग छ । को हदसम्म हिंसा विरुद्ध महिला र शिशुलाई देखाउँछ बस कसरी उच्चारण को पूर्वाग्रह महिला विरुद्ध, र किन महिला बस कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यदि भारत मा जान्छ र परिवर्तन हुन्छ । आउँदै सप्ताह मा त्यहाँ हुनेछ धेरै चर्चा बीच भारतको सबैभन्दा पुरुष राजनीतिज्ञ को विषय मा सुरक्षा छ । तर शायद कसैले सोध्न हुनेछ कि एक देश सुरक्षित छ, भने आधा आफ्नो नागरिक बस्न वृद्धि डर, छैन किनभने एक खतरा आतंककारीहरू द्वारा वा शत्रु सैनिकहरू, तर समाज मा जो तिनीहरूले जन्म थिए. भारत बिर्सन देखिन्छ कि मान्छे को सुरक्षा गर्नु पर्छ पनि समावेश लागि सुरक्षा प्रतिशत महिला जनसंख्या छ । भारत पर्छ तत्काल सम्बोधन गर्न धम्की यस जनसंख्या समूह देखि लिएर, भेदभाव हिंसा गर्न. पूरक सम्पादक: माथि-उल्लेख नम्बर वास्तवमा बुझाउँछ -जन्म बालिका । तर हिंसा विरुद्ध महिला लैंगिक भारत मा सुरु पनि अघि जन्म । मूलतः, यो थियो कि ग्रहण एक लाख छानेर परित्याग गरियो प्रति वर्ष. तर गर्भावस्थाको प्रविधिको प्रगति गर्न जारी, र कला को राज्य अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू हुँदै गइरहेका छन् अधिक व्यापक भारत मा. हाल अनुमान जान देखि — लाख महिला को प्रति वर्ष. मा देशहरू जहाँ मृत्यु शिशुहरु र छोराछोरीलाई छ विशेष नियन्त्रण, मर्न कम मा बालिका मा भन्दा केटाहरू छ । तर तेस्रो सर्वेक्षण को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य भनेर प्रकट, यो पोस्ट नवजात मृत्युदर लागि भारतीय बालिका, तुलना गर्न केटाहरू छ । उमेर समूह एक को चार वर्ष, बाल मृत्यु दर लागि बालिका भन्दा उच्च छ केटाहरू लागि, जहाँ तपाईं मा. रिपोर्ट को विश्व बैंक भन्ने अनुमान भारत हराएको एक्लै मा अन्य केटी । यी तथ्याङ्कले एक निरादर लागि भारतीय समाज । यो क्रमबद्घ मात्र हुन सक्छ किनभने, समाज स्वीकार र सरकार उत्तेजित गर्दछ एक बहिरा कान र अन्धा छ । §§ भारतीय दंड कोड दस्तुर आयातित लागि सोचेर बुभ्केर गरको कारण गर्भपात जना घाइते, नजन्मेको छोराछोरीलाई रोक्न, एक बच्चाको जन्म वा आफ्नो मृत्युको कारण पछि जन्म, साथै लागि रूपमा पर्दाफास एक बच्चा अन्तर्गत वर्ष । के तपाईं लाग्छ कसरी, धेरै आपराधिक ि हुनुपर्छ, पछिल्लो केही वर्ष मा, को आधारमा यी नियमहरू. यो हुन एक लाख छ । को स्तर हिंसा विरुद्ध केटी रूपमा भ्रूण र शिशु कसरी देखाउँछ गहिरो मा भारत को विरुद्ध पूर्वाग्रह महिला बसिरहेका छ, र किन महिला मात्र पक्का हुन, भने भारत एक राष्ट्रको रूपमा स्पष्ट छ र परिवर्तन । यस गरेको छैन, तापनि जनगणना देखाए, कि को अनुपात, महिला-वर्ष पुरानो थियो गिरा देखि, पछिल्लो जनगणना मा अमेरिका । लाखौं बालिका, जीवन, अधिक खराब स्याहार र शिक्षित भन्दा आफ्ना भाइहरूलाई. संयुक्त राष्ट्रको मानव विकास रिपोर्ट भनेर हिसाब भारतीय छोराछोरीलाई ग्रस्त कुपोषण (तुलना मा, चीन मा). तेस्रो सर्वेक्षण, राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य कि प्रकट जब आमा कुपोषणको सिकार भएका छन्, छोराछोरीलाई हो अवरुद्ध र मारे । अधिक शिक्षित आमा छन्, कम संभावना भनेर आफ्नो छोराछोरी बर्बाद हुनेछ दूर वा नष्ट छ ।, भारतीय समाज व्यवहार सानो बालिका, भाइहरू, कि आफ्नो आवश्यकता — नर — प्राथमिकता भन्दा ती आफ्नो बहिनीहरूले. के को बाहिर आउछ यो हिंसा विरुद्ध महिला । अनुमान को हदसम्म को शारीरिक हिंसा विरुद्ध बालिका बाल्यकाल मा, तर यो छ कि ग्रहण गर्न सुरक्षित छ, यो धेरै छ । भारतीय मंत्रालय को महिला र बाल विकास प्रकाशित एक राष्ट्रिय अध्ययन मा बाल दुर्व्यवहार, भनेर देखाउँछ छोराछोरीलाई सर्वेक्षण भोगे एक वा बढी प्रकारका यौन दुर्व्यवहार, यो सीमित अध्ययन भनेर सुझाव को आधा भन्दा बढी भारतीय छोराछोरीलाई ग्रस्त यौन दुर्व्यवहार, तर यो स्पष्ट छ धेरै अधिक व्यापक आशा भन्दा । यो चासो को भन्दा प्रभावित छोराछोरीलाई भनेर रिपोर्ट थियो आक्रमण द्वारा कसैले, तिनीहरूले थाह थियो, अक्सर एक नजिक नातेदार छ । डाटा देखि, राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्यूरो भनेर पुष्टि यो ढाँचा जारी भने, यो केटी एक महिला छ । वर्ष मा, त्यहाँ दर्ता गरेका थिए अवस्थामा बलात्कार । यो अवस्थामा पीडितहरुलाई थाह अपराधियों — तार्किक परिणाम छ कि केटाहरू माथि बढ्न भनेर विश्वास महिला मात्र अवस्थित पूरा गर्न आवश्यकता को मानिसहरूको. देखि मात्र दर्ता अवस्थामा, रिपोर्ट दिइएको डाटा, केवल हिमशैल को टिप को यो अपराध हो । भारतीय समाज परिवर्तन गर्न प्रतिरोधी छ । यो फेला कि औसत विवाहको उमेर अझै पनि छ बस को बारे मा वर्ष, र ठान्छिन् एक सूचक को कम स्थिति को महिला । यसबाहेक, यो तथ्यलाई डोऱ्याउँछ एक कमजोर बनाइरहेका महिला र जोखिम वृद्धि को प्रतिकूल प्रभाव मा प्रजनन र स्वास्थ्य । त्यहाँ पर्याप्त डाटा छ, कसरी साबित गर्न यी हुन्. महिला, विशेष गरी गरिब महिला भारत मा छन् लागि जोखिम मा जन्म दिने अत्यन्तै. अनुसार सेट सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (विकास लक्ष्य) थियो जन्मेका, मातृ मृत्यु दर लागि बाँच्न.
त्यसैले सम्म, भारत कम छ मातृ मृत्यु दर बाँच्न जन्मेका छ । मा लाख जीवित जन्म भारत मा प्रति वर्ष, महिला मर्न कम्तिमा समयमा जन्म । भारतीय समाज अक्सर बेवास्ता छ पनि जडान संग अन्य समस्या. तापनि अन्तर्गत गरेको, एक क्रम जारी थियो कि सबै नव निर्मित घर हुनु पर्छ एक शौचालय, वास्तवमा, धेरै केही घर एक शौचालय छ । यो के गर्न आवश्यक आफ्नो आवश्यकता आउटडोर, देखिन्छ शाब्दिक गर्न निमन्त्रणा बलात्कार । शिकायत गर्न राष्ट्रिय आयोग मानव अधिकार देखाउन कसरी धेरै महिलाहरु छन् या बलात्कार, तपाईं जान भने रात मा क्षेत्रहरु मा. धेरै देशहरुमा, बालिका छन् इन्कार मा आफ्नो किशोर, स्कूल भ्रमण गर्न वा द्वारा लिया आफ्नो आमाबाबुले स्कूल देखि, किनभने स्कूल भवन कुनै शौचालय छ । त्यसैले पनि उनको सही शिक्षा. यो दुःखी छ, तर यो आशा थियो कि भारतीय महिला, विश्वास थियो कि आफ्नो सुरक्षा निर्भर मानिसहरू गरिदिएको तिनीहरूलाई असल बेहोरा. यो देखाए कि सबै विवाहित महिला उजागर गर्दै हिंसा मा विवाह । यो पनि देखाउँछ कि, महिला चिन्तित पाउन यो स्वीकार्य छ कि एक पति बीट्स आफ्नो पत्नी भने त्यो बाहिर जान्छ बिना उहाँलाई थाहा छ, उसलाई भनेर बहस सहवास निषेध छ, छोराछोरीलाई वास्तै छैन, पकाएको, विश्वासघात हो संदिग्ध वा परिवार पतिको अनादर गर्ने थियो. उद्धरण देखि रिपोर्ट:»यो सबै अधिक अधिक संभावना छ कि हिंसा मानिन्छ जायज भने वर्णन व्यवहार उल्लङ्घन के छ कथित रूपमा स्वीकार्य व्यवहार लागि एक महिला मा उनको लिङ्ग भूमिका रूपमा एक पत्नी, आमा र छोरी-मा-व्यवस्था छ ।»र त्यसपछि स्पष्ट, त्यहाँ छ अधिक गर्न प्रेरित आपराधिक हिंसा विरुद्ध महिला । भारत, छन् विशाल समस्या संग मानव बेचबिखन र विशेष जोखिम मा महिला को संघर्ष क्षेत्र.
र-महिला रूपमा, ब्रांडेड
रूपमा अघि, त्यहाँ छन् बाध्य विवाह, बालिका मारिएका छन् किनभने तिनीहरूले विवाह केटा, आफ्नो विकल्प को वा छैन, को पर्याप्त दाइजो ल्याउन, वा अनावश्यक (सर्जिकल हटान को गर्भाशय) अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सिस्टम । समाजमा, साथै बीच रूपमा अमेरिका आधारित छ, सुरक्षा छ । सबैभन्दा कमजोर छन् ती छन् जो कम से कम सुरक्षित छ । महिला मा भारत मा छैनन् खतरा सुरक्षित छ किनभने तपाईं, यो पितृसत्तात्मक समाज परमेश्वरको बिर्सेका छोराछोरीलाई । त्यसैले, भारतको महिला सुरक्षित छन्, तपाईं परिवर्तन गर्नुपर्छ देश — बढी महिला छन् गर्नुपर्छ मा बस्ने संसद र स्थान को राजनीतिक र कार्यकारी महत्व छ । प्रत्येक विकल्प दिन्छ यो संग आशा, को लागि एक नयाँ शुरुवात छ । तर भारत छैन कायापलट छ । यो सुरक्षित हुन सक्छ, छैन, र हुनेछ छैन आदर विकसित रूपमा लामो, लोकतन्त्र मा जो यो त गर्व गर्न अग्रणी तत्काल आवश्यक आधारभूत परिवर्तन को ज्यान यसको महिलाहरु । पाल, लेखक को यहाँ खुलेर अनुवाद को मूल लेखमा को एक पूर्व सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग । यो थियो छोटकरीमा उल्लेख गर्न सामान्य समझ को परिचय पछि नयाँ बीमा योजना लागि परिवारको गरिबी लाइन तल, को संख्या को प्रदर्शन नाटकीय वृद्धि. सायद केही महिला थिए वहन गर्न सक्षम उचित निदान, सर्जरी. मा वृद्धि तर, यो थियो त आमूल थियो कि ग्रहण हुनेछ, बिरामी प्रदर्शन, घर अन्तर्गत अधिकतम निभाउन र टेम्पर्ड प्रक्रिया अनावश्यक छ । यस को लागि भाषा, कि धेरै प्रभावित महिला अन्तर्गत वर्ष पुरानो छ । जांच थिए, सुरु । यो शायद कहिल्यै हुन एकदम माथि खाली, जो सञ्चालन गर्न आवश्यक थिए । तर अवस्थामा खोल छन् जसमा हस्तक्षेप»मात्र थियो लिएका ठाँउ मा कागज». हाल को रिपोर्ट बारे अनावश्यक परिचालन. किन भारतीय महिला, रीता को संस्थापक,»एक लाख गल्ती»अभियान, जन हत्या को भारतको महिला र बालिका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ नरसंहार, र संसारको लागि झगडे, कि यो छ पनि रूपमा मान्यता यस्तो र सजाय, त्यो बताउँछन् मा उनको लेख»किन विनाश भारतीय महिला रूपमा देख्न गर्नुपर्छ नरसंहार (नरसंहार).»तपाईं समर्थन गर्न सक्छौं विरुद्ध लड्न नरसंहार मा भारत, द्वारा, उदाहरणका लागि, निवेदन अभियान साइन र यो पेज को अभियान जस्तै ।
← डेटिङ भारतीय महिला सुझाव डायरी
च्याट - पागल - फ्री एकल सामुदायिक च्याट गर्न, पूरा र इश्कबाज →